Oghere na-adọba ụgbọala Ere na mgbazinye na Realtyww Info
1 - 10 nke 23 Ndepụta
Ebiputara site na Daniel Brewer
nlele Oghere na-adọba ụgbọala Bipụtara 3 days ago
Ebe a na-adọba ụgbọala bụ ebe a na-edobe ya maka ebe a na-adọba ụgbọala, ma ọ bụ emepe emepe. Ebe a na-adọba ụgbọala nwere ike ịbụ n’ebe a na-adọba ụgbọala, n’ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ n’okporo ụzọ obodo. Ọ na-abụkarị oghere edoziri edoziri n’elu ihe ndị dị n’elu ala. Thegbọala dabara n'ime oghere, ma ọ bụ site na ebe a na-adọba ụgbọala, ebe a na-adọba ụgbọala nke ọma ma ọ bụ ebe a na-adọba ụgbọala. Dabere na ọnọdụ ebe a na-adọba ụgbọala, enwere ike ịnwe iwu gbasara oge a na-adọba ụgbọala na ụgwọ a na-akwụ iji jiri ebe a na-adọba ụgbọala. Mgbe oke oghere dị iche iche na-ebupute ugbo ala nwere ike ịgafe ogige n'akụkụ ụzọ, ahịhịa ahịhịa na ebe ndị ọzọ emeghị maka ebumnuche ahụ.